Jobho Mikana uye Kubatsira kweOracle Certification Course - ITS
OCP kana Oracle zviyeuchidzo zvirongwa zvakakurumbira pamusana pekushandiswa kwebhodi yeOracle purogiramu, zvinhu, uye masimba. Zvirongwa zvekugadzirisa zvinogadzirwa naOracle pachako uye zvinopa tariro yekudzidza uye unyanzvi hunoonekwa nekushandiswa kweOracle zvinopiwa. Oracle certification vashandi vanoshandiswa neMNCs, masangano e Fortune 500 nedzimwe sangano dzakasununguka uye dzakasununguka, uye inogamuchira basa rakakosha zvikuru uye rinopa mubhadharo mumunda waro kana Technology Information, kodzero yekuchengetedza mabhuku, deta huru, gore uye zvimwe zvikamu.
Oracle certifications nhasi inowanikwa mu9 zvakasiyana-siyana zvikamu zvinosanganisira Database, Application, Java uye Middleware, Systems, Oracle Cloud, Operating Systems, Enterprise Management uye Virtualization. Oracle dheti dzedikiti dzesvomhu dzinonyanya kuzivikanwa sezvikonzero zvehupenyu hwavo hwechokwadi uye dzinoshandisa. Izvi zvikwangwani zvinopiwa pamhando dzakasiyana-siyana uye zvinokugadzirisa nzira inobatsira yekufambira mberi. Maitiro mashomanana apo zvikwangwani zveOracle dhesikiti zvakapiwa naOracle zvinosanganisira:
Oracle Certified Associate Certification: Nzira yepamusoro yepamusoro inodzidzisa mupikisheni kutanga mazano mu database yekuchengetedza uye sangano.
Oracle Certified Professional Certification: Iyi nyanzvi inogona kutarisana nehukuru hwemashoko ezvo uyezve kuumba zvikumbiro izvo zvakanyanyokosha kune zvemabhizimisi mabasa.
Oracle Certified Master Certification: ichi chiyeuchidzo chinopa mvumo yekutsvaga kutarisa uye kugadzirisa zvigadziriswa zvigadziriro zvemashoko edzimhosva uye zvibvumirano zvakabatana nazvo.
Oracle Certified Expert Certification: Ichi chiyeuchidzo chinoratidza kuti iwe une unyanzvi hunobudirira uye kudzidza mune dzimwe nzvimbo, kufambira mberi uye kugadzirwa kwemadhina.
Kubatsirwa kweOracle Certification yeVadzidzi
Makomborero eOracle Certification for the Employing Organization
Oracle App Developer Developer
Iva Chirevo cheChiratidzo
Oracle certification mundima dzakadai seOracle DBA course uye vamwe vanopa mikana yakawanda kune avo vanovabata. Zvimwe zvezvi zvinosanganisira:
Kuwedzerwa mubhadharo kana kuwana
Zviri nani kugutsikana
Kufambira mberi kwakakwirira
Zviri nani kushandiswa shots
Shanduko mune unyanzvi uye unyanzvi
Anokudzwa uye akajeka kunzwisisa kwe teknolojia inowanikwa
Chirongwa chechidimbu chinofanirwa kuitwa kuburikidza nekupedzisa mvumo yehurumende inoshandiswa. Oracle certifications vane chivimbo chakasimba uye unhu husingaverengeki uye chiratidzo chechokwadi.
Mabhizimisi anowedzerawo kuwana huwandu hwakawanda hwezvakanaka kuburikidza nekuwana mukwidzikwi ane Oracle DBA kana imwewo Oracle certification. Zvimwe zvezvi zvinosanganisira:
Nzira yakanaka yekutendeseka
Zviri nani kuurayiwa pamabasa
Kuwedzera kuzadzika basa rinokosha
Yakakwirira uye inotenderera yakawedzera kubatsirwa
Kunyoresa zviri nani nesangano revatengi nekuwedzerwa mukuremekedzwa kuMusika
Basa reOracle rekuzarura hazvidzivisiki sezvo maitiro eOracle uye mahofisi ari mitsara yezviuru zvemasangano panyika.
Vashandi vebazi reOracle vanowana basa mune zvipo zvekuporesa, masangano eI, masangano emari, mahofisi ekupa mazano ekugadzirisa, masangano ehurumende uye hurumende uye PSUs, Masayunivhesiti, zvikoro nezvimwe zvikoro zvezvidzidzo, makambani mune chikamu chekombiyuta yemashoko uye mune zvimwe zvikamu zvemazuva ano zvakare. Iyi nyanzvi inotarisira nyaya dzakasiyana-siyana dzekuchengetedza dzinozivikanwa neOracle databases uye dzinowedzera mukuchengetedza kuchengetedza, kushanda nekudzidzora pamazuva ose ekugadzirisa.
Iyi nyanzvi dzeT IT dzinoshanda sevadzidzisi vepa database, PC software injini, uye vatungamiriri veOracle masangano uye zvirongwa, uyezve vanowana basa sevatambi vePC, uye web designers nevatariri. Vanogona kutsanangura maitiro matsva uye vanogonawo kutarisa kuchengetedzwa kwemagadziriro, maitiro, uye maitiro. Vanogonawo kunge vari kutarisira kusika nekuchengetedza zvigadziro zvepa database uye zvingave nezvimwe zvinyorwa zvinowanikwa nehutano zvinoshanda zvakare.
Kunze kubva kune database uye zvishandiso, pane dzakawanda zvepamusoro dzemakoromendi umo Oracle certifications inogona kuwanikwa. Kutyaira pa web webunyanzvi ruzivo rwekodhi-ops kunokugonesa kuti uite Oracle chiyeuchidzo kubva kune mazhenje eimba yako pachako. Pano iwe unogona kunze kwekuwanda kwekutambanudza maoko-pane Oracle DBA kugadzirira mumabasa echokwadi, gadzirirwa nevadzidzisi vezvidzidzo uyezve kune zuva rose, zuva rimwe nerimwe kuwanikwa kune zvinhu zvose zvekudzidza nezvinhu zvinogona kukuita iwe nyanzvi yeOracle.
muna 5 Days